राजपा नेपालमाथि आउनै लागेको हो त अर्को संकट ? | सहारा टाइम्स
Home » Main-News » राजपा नेपालमाथि आउनै लागेको हो त अर्को संकट ?
SAHARA TIMES Monday, April 2, 20180No comments
काठमाडौ चैत १९ गते । नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चका पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरुले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा नेपाल) भाडामा रहेको मञ्चको कार्यलय भवन खाली गराउन माग गर्नुभएको छ ।
बबरमहलस्थित मञ्चको कार्यालयमा सोमवारदेखि शुरु भएको मञ्चको पूर्ण बैठकमा उहाँहरुले सो माग उठाउनु भएको होे ।
बबरमहलमा रहेको मञ्चको कार्यालय भवनमा राजपा नेपाल भाडामा बसेको छ । मञ्च राजपा नेपालको भातृ संगठन नभएको हुनाले सो दललाई त्यस भवनमा कार्यालय राख्न दिन नहुने तर्क दिँदै झापाका कमलदेव चौधरीले पार्टी कार्यालय तत्काल हटाउनुपर्ने माग गरेको बैठकमा सहभागि एक सदस्यले जानकारी गराउनुभयो ।
यो मञ्चले मधेशका राजपा नेपाल र फोरम नेपाललाई समान दृष्टिले हेरेको छ तर मञ्चका केही पदाधिकारीले मञ्चलाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका कारण राजपा नेपालको भातृ संगठन जस्तै बनाई दिएको आरोप विजयकुमार सिंहको रहेको बताइएको छ ।
मञ्चका पूर्वअध्यक्ष विनोदकुमार सिंहलाई राजपा नेपालका नेताहरुले जागिरबाट राजिनामा दिन लगाए पनि प्रदेशको समानुपातिक सदस्य नबनाएको गुनासो पनि बैठकमा भएको थियो ।
समानुपातिक सांसद बनाउँछु भनेर जागिरमा रहेका विनोद सिंहलाई राजिनामा गर्न लगाए तर पछि दिएन त्यस कुरामा पनि मञ्चका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु आपत्ति जनाउँदै रोश प्रकट गरेको मञ्चका एकजना पदाधिकारीले बताए ।
विनोद सिंहलाई समानुपातिक सदस्य नबनाएपछि मञ्चका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले राजपा नेपालको पार्टी कार्यालयमा तोडफोड गरेको थियो ।
मञ्चका लागि बनाइएको यो भवन अहिले राजपा नेपालको कब्जामा छ । मञ्चको कुनै अस्तित्व छैन भन्ने कुरा सिरहाका अमरेन्द्र यादवले बैठकमा उठाएको स्रोतले जनाएको छ । आधिकारीक ट्रेड युनियनको चुनावमा यो मञ्चले सातवटा जिल्लामा चुनाव जितेको छ तर आफ्नै भवनमा अलपत्र परेको छ ।
त्यसैले राजपा नेपाललाई हटाउनु पर्छ त्यसअघि पार्टीको बोर्ड तत्कालै हटाउनु पर्ने माग बैठकमा उठेको स्रोतले जनाएको छ ।
राजपा नेपाललाई त्यो भवनमा कोठा अपुग भएपछि अहिले माथिल्लो तल्ला थप्ने काम भइरहेको छ तर मञ्चमा यसको कुनै जानकारी छैन । अमरेन्द्र यादवले बैठकमा भनेका थिए, कुनै संगठन वा व्यक्ति कसैको घरमा भाडामा बस्दा विना अनुमति कसरी तल्ला थप्न सक्छ । तल्ला थप्नका लागि घरभेटीको अनुमति लिनुपर्छ कि पर्दैन । कसको अनुमतिमा राजपा नेपालले तल्ला थपिरहेको छ ।’
मञ्चको भवनमाथि तल्ला थप्ने निर्णय मञ्चमा भएको छैन । तर धमाधम काम भइरहेको छ । पूर्व अध्यक्ष विनोद सिंहले राजपा नेपालले आफै तल्ला थप्ने काम गरिरहेको कुरा बैठकमा राख्नु भएको थियो ।
मञ्चको भवनबाट राजपाको कार्यालय हट्नुपर्छ भन्ने पक्षमा कमल देव चौधरी, विजयकुमार सिंह, अजयकुमार झा, झारोखी साह, अमरेन्द्र यादव, सच्चीन्द्र यादव, लालबाबु यादव, रामबाबु साह, राजुशरण यादव, बेचन यादव, उमेश मिश्र, रामशंकर यादव, विन्देश्वर पटेल, अमरदेव यादव, उपेन्द्र यादव, विनोदकुमार सिंह (सिन्धुली) लगायतका रहनु भएको बैठक स्रोतले जनाएको छ ।
बैठक भोलीसम्म चल्ने बताइएको छ ।
सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएपछि कर्मचारीको चन्दा तथा सरकारको सहयोगमा मञ्चले तीन तल्ला भवन बनाएको थियो । भवन निर्माणको शिल्यानाश राजपा नेपालका संयोजक रहेका महन्थ ठाकुरले नै गरेका थिए । त्यतिबेला ठाकुर तमलोपाका अध्यक्ष थिए ।
सरकारको सहयोगमा बनेको भवनमा एउटा पार्टीलाई बस्न दिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो । अहिले मञ्चको बैठकमा समेत विरोध हुन थालेको छ ।
मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरीको अध्यक्षतामा बसेको बैठक भोलीसम्म चल्ने बताइको छ ।
राजपा नेपालको चैत २१ गते अध्यक्ष मण्डलको बैठक बस्न गइरहेको छ भने २२ गते संसदीय दलको बैठक र २७ गते राजनीतिक समितिको बैठक बस्न गइरहेको छ ।